च्याम्पियन्स लिग : फुटबलमा सनसनी मच्याउनेहरु | Emedia Hub UK
Home Sports च्याम्पियन्स लिग : फुटबलमा सनसनी मच्याउनेहरु
च्याम्पियन्स लिगको सन् १९९२ को सिजनयता लगातार ट्रफी जित्ने इतिहास बनाएको रियल मड्रिडले त्यसअघि नै इतिहास बनाइसकेको थियो ।
वास्तवमा सवाल के हो भने आफ्नो पहिलेको उपलब्धि जस्तै ९१९५६ मा युरोपियन कपको सुरुवात भएपछि रियलले लगातार पाँच संस्करण जितेको थियो ? रियलले यो समयमा पनि त्यस उपलब्धि दोहोर्‍याउन सक्ला ?
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ६ बेलायती क्लबहरुका साथ मंगलबारदेखि सुरु हुँदैछ ।
अपेक्षा गरिएको छ कि यस सिजनको च्याम्पियन्स लिग अहिलेसम्मकै प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ ।
त्यस दिशामा रियल मड्रिड अहिलेसम्म सकारात्मक देखिएको छ, सायदै कुनै टोली च्याम्पियन्स लिगको सिजनमा यति बलियो दावेदारको रुपमा देखिएको छ ।
लामो सहयपछि सान्टियागो बर्नबाउमा यस्तो लागिरहेको छ कि सुपरस्टारहरु भविश्यका लागि योजना बनाइरहेका छन् ।, अनलाईन खबरले यो समाचार लेखेको छ ।
क्लब मार्को एसेन्सियो, ड्यानी सेवालोसजस्ता अन्य थुप्रै युवा प्रतिभाको चयन गर्न लागिरहेको छ । र उसँग प्रशिक्षकको रुपमा जिनेदिन जिदाने नामका यस्ता व्यक्ति छन्, जो फाइदाका लागि भन्दा पनि योग्यताका आधारमा खेलाडी छनौट गर्ने खुवी राख्छन् ।
जिदानको कार्यकालको सफलता अहिलेसम्म केवल ट्रफीका आधारमा मात्र मापन गर्न सकिन्छ । तर, यस तथ्यबाट पनि ग्यारेथ बेल जिदान बेलका ठूला प्रशंसक हुन् जस्ता सुपरस्टारले समेत टिममा आफ्नो भूमिकाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनकि पछिल्लो ६ महिनादेखि इस्कोले त्यही भूमिकामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
क्रिष्टियानो रोनाल्डो, टोनी क्रुज, लुका मोड्रिड, सर्जियो रामोसको शेषपछि इस्को, एसेन्सियो र अन्य स्टारहरु समेटेर टिम सेट गर्दैछन्, जसको भविश्य अहिले उज्वल देखिएको छ ।
यदि रियल मड्रिड अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी ट्रान्सफर मार्केटमा हुने महंगा महंगा ट्रान्सफर कीर्तिमानबाट हात झिकेको हो भने, उसको बिँडो थाम्ने गरी कुनै क्लब अगाडि बढेको छ भने त्यो हो पेरिस सेन्ट जर्मेन ।
नेइमारको ट्रान्सफर हस्ताक्षरले विश्व फुटबलमै सनसनी मच्चाइरहेको छ । र, यसले फ्रान्सेली जायन्टका लागि एक नयाँ मोडको रुपमा महशुस गरिएको छ । कतार स्पोर्टस इन्भेस्टमेन्टले सन् २०११ मा क्लबको स्वामित्व ग्रहण गरेपछि पीएसजीले हासिल गर्न बाँकी उपलब्धी भनेको च्याम्पियन्स लिगको उपाधि मात्र हो ।
फ्रान्सका अहिलेका सबैभन्दा उत्कृष्ट स्ट्राइकर केलिन एमबाप्पेलाई मोनाकोबाट भित्र्याएपछि र नेइमारलाई अनुबन्ध गरिसकेपछि पिएसजीको अग्रपंक्ति विश्वमै उत्कृष्ट भएको बताइन्छ । तर, यो समीकरण बिल्कुलै नयाँ हो, ब्राजिली युवा, फ्रान्सेली किशोर र भेट्रान एडिसन काभानी । पहिलो सिजनमा उनीहरुको समन्वय भने हेर्न बाँकी नै छ ।
तर, यसका केहि सन्देह छैन कि विश्व फुटबलमा यी तीन स्ट्राइकरले तहल्का पिट्दैछन् । केहि मानिसको चिन्ता यो पनि छ कि काभानी छायाँमा पर्नेछन्, जसरी ज्लाटन इब्राहिमोबीच हुँदा उनीले त्यो भोग्न बाध्य भएका थिए ।
तर, नेइमार र एमबाप्पे दुवै वाइड एरियाबाट एट्याक गर्न रुचाउँछन् । एमबाप्पेले यसै वर्षको सुरुमा भनेका थिए कि नम्बर ९ जर्सीमा खेलेका रामाडेल फाल्काओलाई केन्द्रमा खुलेर खेल्न दिनुपर्छ, जसको उनलाई जरुरी छ । काभानी पनि त्यही गर्छन् ।
तर, चिन्ताको कुरा केहि अर्कै छ ।
गत सिजन अन्तिम १६ मा पीएसजीलाई ध्वस्त बनाएपछि पाएको वाहीवाहीको सजाय बार्सिलोनाले नेइमारलाई गुमायो । त्यस जित पछिल्लो वर्षमा उसले प्रयोगमा ल्याएको सामूहिक गेमका कारण नभई नेइमारको एक्लो प्रयासका रुपमा बुझियो ।
नेइमार क्लबमा रहन चाहेनन्, त्यस्तै क्लब म्यानेजमेन्टले पनि विश्वास गुमाउन पुग्यो । लियोनल मेस्सीले अहिलेसम्म प्रस्तावित नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन्, अर्को समरमा उनको सम्झौता सकिँदैछ । निक्कै दबावमा देखिएका क्लबका अध्यक्ष जोसेप बार्टोमेउले दाबी गरेका थिए कि आन्द्रेस इनिएष्टा नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार थिए, तर महान मिडफिल्डरले सार्वजनिक रुपमै इन्कार गरे ।
खराव म्यानेजमेन्ट र खेलाडी अनुबन्धमा खराव निर्णयका कारण बार्सिलोना आलोचित भइरहेको छ । यस सिजन नेल्सन सेमेडोजस्ता प्रतिभाशाली राइक ब्याक, मिडफिल्डमा पाउलिन्होको अनुबन्धले उसका केहि छिद्र पुर्ने प्रयास गरेको छ । पाउलिन्हो तिनै खेलाडी हुन्, जो टोटनहृयामका सुपर फ्लप भएका थिए ।
एमबाप्पेले मोनाकोका टिममेट फाविन्होलाई निक्कै मिस गर्नेछन् । किनभने पीएसजीमा सायद मिडफिल्डमा अपेक्षाकृत मिडफिल्डरको अभाव छ ।
केभिन ट्र्याप हुन् या अल्फान्स एरोलिया नै किन नहुन्, उनीहरु वास्तविक पोजिसनमा देखिन्नन् । गत सिजन च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा बार्सिलोनाले उसले यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै धावा बोलेको थियो ।
टुँडिखेलमा यसरी नाचे दर्शकसंग नेपाल आइडलका प्रतिस्पर्धीहरु